Fil d'actualités du 15/02/2019
15/02/2019 - 10:30 : HERY VALISOA: Anio no aterina eny amin'ny fasan-drazany eny Ambohitompo kaominina Ambanivohitra Viliahazo, distrikan'Antananarivo Avaradrano ny nofo mangatsiaka an' i Tompokolahy Hery Valisoa.
15/02/2019 - 10:00 : BASKET AFROLEAGUE: Manomboka anio 15 febroary eny amin'ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny fifaninana Afrikanina "Afroleague", ho an'ny vondrona D. Ny BC Mazembe avy any Congo sy ny Smouha avy any Soudan no hanokatra ny lalao amin'ny 3:30. Ny COSPN, tompondakan'i Madagasikara sy ny faritra faha-7 kosa hiaka-tsehatra amin'ny 18:30, hifandona amin'ny Klioba Angolais Petro de Luanda.
15/02/2019 - 09:30 : KAOMININA ANTSIRABE: Manao fitokonam-be ny mpiasa amin'izao fotoana izao noho ny tsy faharaisana karama 10 volana.
15/02/2019 - 09:00 : SMM: Clément Jaona sy Andrianiaina Franklin James Rakotomahanina no hifandrina amin'ny fifidianana izay ho filohan'ny Sendikan'ny Mpitsara eto Madagasikara hatao anio 15 febroary.
14/02/2019 - 20:00 : MBOLA JOSEPH RAJAONAH: Naiditra vonjimaika eny amin'ny Fonjan'i Tsiafahy izy taorian'ny fanadihadiana teny amin'ny Fitsarana misahana ny kolikoly na ny PAC eny 67Ha.
14/02/2019 - 14:00 : KIDNAPPING : Tovovavy iray tokony ho 18 taona no nalain'ny jiolahy an-keriny tao Marokoro Maevatanana omaly Alina hifoha androany.
14/02/2019 - 13:30 : TOAMASINA : nanafika tokony ho tamin'ny 11 ora sy 45 minitra teo ny Aigle d'or ao Ambolomadinika Toamasina. Nitondra fitaovam-piadiana ireo jiolahy ary mbola tsy voafaritra ireo zavatra lasany.
14/02/2019 - 11:30 : RAHARAHA ANDO TIANA: Efa tamin'ny alatsinainy 4 febroary teo no itan'ny polisy tao am amin'ny tanana hoe Bougival, akaikin'ny Rueil Malmaison izay fonenany ihany ny vatana mangatsiakan'i Ando Tiana. Rehefa avy natao ny fizahana isan-karazany izay vao nampandre ny fianakaviany ny polisy. Mitohy ny fanadihadiana.
14/02/2019 - 11:00 : CAN 2019: Efa mivoaka ny sary famantarana ny CAN 2019 hatao any Egypte saingy tsy mba ao anatin'ilay sarin'i Afrika i Madagasikara, firenena isan'ny tafiakatra voalohany. Malagasy anefa ny Filohan'ny CAF. Tandrevaka sa inona loatra?
Archive du 20180808
Gilbert Raharizatovo « Misy antony matoa tsy rototra ireo kandida lehibe »
Lalandy Andriamitosy “Tsy tokony hahazo milatsaka ny mpanongam-panjakana”
Andry Rajoelina Dimy taona tsy nisy napoaka
Paipaika amin’ny fifidianana Hampanaovina ketrika maloto ireo ben’ny tanàna…
Fanarenana an’i Madagasikara Ananan-dRavalomanana ny fahaiza-manao
Jean Max Rakotomamonjy Atosika mafy ho kandida filoha
Fiovaovan’ny toetr’andro Tena marefo i Madagasikara
Fitsarana ambaratonga voalohany Antsirabe Ny Haingo Nasoloharivelo no filoha vaovao
Olana eo amin’ny tontolon’ny Rugby Hanao diabe ny FTMRAT
Andravoahangy tsena Haharitra 20 andro ny fanamboarana ireo lalan-dratsy
Sekoly ambony INSPNMAD Miroso mankany amin’ny fikirakirana ny teknolojia avo lenta
Fiara tratry ny tifitra variraraka Olona 1 maty, 5 naratra mafy
Fandraisana an-tanana ireo olona adala Mbola miantona eny Tsimbazaza ny fandaniana ilay lalàna
Famoronana na fanafoanana vola taratasy Miankina amin’ny zava-misy amin’ny firenena